Umdibaniso woyilo-ukuzibophelela kwi-BIM ephambili ngamawele edijithali- iiGeofumadas
Amawele idijithali "i-Evergreen" andisa ixabiso lomsebenzi weenjineli zeziseko zophuhliso kunye nemodeli evulelekileyo yokulinganisa kunye neWindows. ngalo lonke ixesha lokujikeleza kwezinto zexabiso
I-Bentley Systems, edityanisiweyo, umboneleli wehlabathi wesoftware ebanzi kunye neenkonzo zefu zamawele edijithali ukuqhubela phambili uyilo lwezixhobo, ulwakhiwo kunye nokusebenza, namhlanje kubhengezwe ukongezwa kunye nohlaziyo kwimodeli evulekileyo kunye nokusetyenziswa kokulinganisa ukuqhubela phambili ubunjineli amawele edijithali kuyo yonke imijikelezo yobomi beasethi. Izicelo ezivulekileyo zeBentley zixhasa ukusebenzisana, ukuphindaphindeka kunye nokusebenza ngokuzenzekelayo kwedijithali okuhamba noqeqesho oluninzi olunxulumene nezixhobo. Ngoku ngeenkonzo ezintsha zamafu zamawele edijithali, ixabiso leshishini kunye nokwazi indlela eyandisiweyo kulo lonke ulwakhiwo kunye nokusebenza kwezigaba zempahla yexabiso.
«Ukwamkelwa ngokubanzi kwe-BIM kuxhamle kakhulu kwiingcali nakwiiprojekthi ze-AEC kule minyaka ilishumi elinesihlanu idlulileyo, kodwa ngoku, ngeenkonzo zelifu, imodeli yokwenyani kunye nohlalutyo oluphambili, singaya ngaphambili kwi-BIM ngamawele edijithali »Utsho uSantanu Das, usekela-mongameli osisikhundla esiphezulu kumdibaniso loyilo kwi-Bentley. "Ukuza kuthi ga ngoku, ukusetyenziswa kwe-BIM kuthintelwe ekuhambiseni izinto, ezinokuthi, emva kokuba zisiwe kulwakhiwo, ziphelelwe lixesha ngokukhawuleza, zilahlekelwe lixabiso elinokubakho ledatha yobunjineli elivalelwe kwiimodeli ze-BIM. Ngoku, ngamawele edijithali. , singavula idatha yobunjineli kwimodeli ye-BIM enezinto zayo zedijithali njengesiqalo, ngokuqhubekayo uhlaziya umxholo wedijithali ngokuqatshelwa kwe-drone kunye nemodeli yokwenyani- kwaye kulapho apho iba yinto enomdla kakhulu - Ukufaneleka kweeasethi kuyo yonke inkqubo yobomi bayo edijithali. Okokugqibela, ixabiso ledatha yobunjineli kwimodeli ye-BIM inokwandiswa ngaphaya kokudluliselwa kolwakhiwo kunye nokudluliselwa kwimisebenzi, ukuqinisekisa kunye nokuphuculwa kokubini kweprojekthi kunye nokusebenza kweeasethi. Ukuhambisa i-BIM ukuya kwi-4D ngokusebenzisa i-evergreen yedatha yedijithali kuthetha ukuba imodeli yoyilo kunye nokuqunjelwa kungasebenza ngeenjongo ezinkulu kunokunikezelwa kweprojekthi, iya kufana neDNA yedijithali yeasethi ephilayo!
Iinkonzo ezintsha kwilifu ledijithali kumafutha woYilo
Izinto zokunxibelelanisa uyilo lweMicrosoft ngoku zivela kwizicelo zedatha ukuya kwiinkonzo zelifu, ukunika imibutho ithuba lokudala, ukubona nge-4D kunye nokuhlalutya amawele edijithali yee-asethi zeziseko zophuhliso. Iinkonzo ze-ITwin zivumela abalawuli beenkcukacha zedijithali ukuba babandakanye idatha yobunjineli eyenziwe zixhobo ezahlukeneyo zoyilo zibe ngamawele edijithali aphilayo, yongeza idatha edibeneyo kwaye ilungelelanise kunye nemodeli yenyani, ngaphandle kokuphazamisa izixhobo zabo okanye iinkqubo zabo.
Uphononongo loyilo lweTwin yenza kube lula iiseshoni zovavanyo yoyilo. Ivumela iingcali ukuba ziqalise uphononongo lwe-ho hoc kwi-hybrid 2D / 3D, kunye neqela leprojekthi elisebenza ngamawele edijithali ukwenza uphononongo loyilo kunye nolungelelwaniso loyilo lolungelelaniso. Inika ukuhamba komsebenzi:
(kwiingcali) ukumakisha kunye nokuphawula ngokuthe ngqo kwizinto zeemodeli ze-3D kunye nokutshintsha phakathi kwe-2D kunye nembono ye-3D ngaphandle kokushiya imeko ye-3D
(kwiiprojekthi ezisebenzisa iProjekthiWise) ukubona ama-4D amawele edijithali: thimba utshintsho lobunjineli ecaleni komda wexesha leprojekthi kunye nokunika irekhodi elinoxanduva lokuba ngubani otshintshe yintoni kwaye nini
iTwin OpenPlant, le nkonzo ibonelela abasebenzisi be-OpenPlant ngendawo yokusasaza yomsebenzi kunye nezalathiso ezihambelana ne-bi-mwelekeo phakathi kokumelwa kwi-2D kunye ne-3D yamacandelo edijithali.
Vula iiSicelo zeModeli kunye nokuVula iiSicelo zeSIMUL
Izinto zokwabelana kunye nokudibanisa ukuhamba komsebenzi wedijithali phakathi kwezoluleko sisiseko sendalo yemodeli evulekile. Idityaniswe nobunjineli kunye ne-BIM ngokusekwe kwiMicrosoftStation ekhethekileyo yeentlobo zee-asethi kunye nezisombululo, imodeli evulekileyo yemodeli yaseMetherlands ikhuthaza intsebenziswano, ukuququzelela ukusonjululwa kwempixwano kunye nokuveliswa kwezinto ezihanjiswa ngokutsha ezivela nasiphi na isicelo.
Ukuphuhliswa kwezicelo zayo kwiqonga leMicroStation kuqinisekisa ukusebenzisana, ukufikelela kwindawo edityanisiweyo yedatha kunye neenkonzo zedijithali ezinjengeZiko lezinto zamathala eencwadi abelwanayo kunye neGenerativeComplate yokuyila amandla okuvelisa. Ukongeza, uhlalutyo kunye nokulinganisa ubunjineli obuhlanganisiweyo buvumela abaqulunqi ukuba banciphise iimeko ezahlukeneyo ukufezekisa isisombululo esifanelekileyo, kungekuphela kuyilo lokuqala, kodwa kunye nokungenelela okulandelayo kunye nokuphuculwa kwemali eyinkuzi.
Vula uhlaziyo lweZicelo zeModeli
(Entsha) I-OpenWindPower ibonelela kwintsebenziswano phakathi kokuyilwa kwezicelo kunye nohlalutyo lobuchwephesha, ulwakhiwo kunye nokusebenza ngemibhobho, ukuhambisa ukuhamba komsebenzi kunye nokutshintshiselana ngolwazi phakathi kwezoluleko, ukunciphisa umngcipheko kuyilo nokusebenza kweefama zomoya ezingashukumiyo nezinxweme. I-OpenWindPower inika abasebenzisi imodeli yeinjini yomoya ukuba bakwazi ukuqinisekisa imeko yoyilo, ukwenza uhlalutyo, ukunciphisa umngcipheko kunye nokuvelisa ulwazi kwintsebenzo yabo elindelekileyo.
"I-OpenWindPower ishunqisa imijikelezo yoyilo iyonke kwaye isombulula ngempumelelo ingxaki yoyilo olukhulu, kuncitshiswa iindleko zokuphuhliswa kwamandla elwandle," utshilo uGqr Bin Wang, usekela njineli oyintloko weZiko leMfundo elitsha. Amandla, POWERCHINA Ubunjineli beHuadong.
(New) I-OpenTower sisicelo esenzelwe ngokukodwa uyilo, amaxwebhu kunye nokwenziwa kweethala zonxibelelwano ezintsha, kunye nokuphononongwa okukhawulezayo kwemitya yefowuni ekhoyo yabanini beenqaba, abacebisi kunye nabaqhubi abafuna ukuqhubeka bahlaziya izixhobo. Ukuqaliswa kwe-OpenTower kumiselwe ukukhutshwa kwe-5G elandelayo.
“Ngoncedo lwezicelo zeMicrosoft, uyilo nohlalutyo lweethala zilula, zikhawuleza kwaye zithembekile. Ikwanika abathengi bethu ukwaneliseka, ukuzithemba noxolo lwengqondo, kwaye iphucula ukhuseleko loluntu, ”utshilo uFrederick L. Cruz, umongameli kunye ne-CEO yeFL Cruz Engineering Consulting.
Umyili weSitishi seVenBuildings ngoku ibandakanya i-LEGION kwaye iphucula umgangatho woyilo ngokusebenza koyilo lwendawo yesikhululo sokwakha kunye neendlela zokuhamba zabahamba ngeenyawo
I-OpenSite Designer Ngoku kubandakanya ukubanakho kwendawo yokuhlala, ukuxhasa ukuqonda kunye noyilo lweepropathi zokuhlala, ukwahlelwa kweeplani, kunye nokwenziwa kweeplani zesiko.
Umyili we-OpenBridge ngoku udibanisa i-OpenBridge Modeler nohlalutyo kunye noyilo lweempawu ze-LEAP Bridge Concrete, LEAP Bridge Steel kunye neRM Bridge Advanced.
I-OpenRoads SignCAD Ukuphuculwa kweendlela ezivulekileyo zokwenza imodeli ye3D yeempawu ngaphakathi kwendlela ezintsha okanye ezikhoyo.
Vula uhlaziyo lwesicelo sekulingisa
(Entsha) IiNkqubo zeMigangatho yabhengeza ukufunyanwa kweeCitilabs, ukuvumela iimodeli zayo zeendlela zeCUBE ukuba zibekho kwi-OpenRoads.
Ukusetyenziswa kwe-geotechnical PLAXIS kunye ne-SoilVision kuvumela iinjineli ukuba zisebenzise iindlela ezininzi zohlalutyo, nokuba zizinto ezigqityiweyo okanye zikumda olinganayo. Ukusebenzisana okutsha kunye ne-RAM, STAAD kunye ne-OpenGound kuphucula umgangatho wezisombululo ezibanzi zejeyometri yoyilo oludityanisiweyo kunye nohlalutyo lomhlaba, amatye kunye nolwakhiwo oludibeneyo.
Ukusebenzisana kwedijithali ukulungiselela ukudityaniswa koyilo
(NgeNokia) iiRowudi eziVulekileyo zeMpahla ziya kuthatha indawo I-Aimsun ukusuka kwi-Nokia ukulungiselela ukwenziwa kwethrafikhi yenqanaba elincinci.
(Nge-Nokia) Umyili wenqwelomoya olandelayo we-OpenRail udibanisa uMyili we-OpenRail kunye ne-Nokia SICAT Master.
(Nge-Nokia) I-OpenRail-Entegro yoQeqeshiso yesithuthi Simanya ukudibanisa i-Nokia Entegro kunye nokuLawulwa kweSitayile esiZenzekelayo kunye neBextley ContextCapture, i-OpenRail ConceptStation, uMyili we-OpenRail kunye neLumenRT, yokusebenza ngeDijithali yamawele.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iindaba zeGeo-Engineering-Unyaka kwiziseko zophuhliso-YII2019
Post Next «I-EthicalGEO» - isidingo sokujonga kwakhona umngcipheko weendlela ze-geospatialOkulandelayo »